Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Sheekada Carruurnimada Ferran Torres Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Soo dhawow!. Maqaalkeenu wuxuu bixiyaa daboolis buuxda oo ku saabsan Taariikhda Carruurnimada Ferran Torres, Taariikh nololeedka, Xaqiiqda Qoyska, Waalidka, Nolosha Hore, Nolosha, Gabadha saaxiibka ah, Nolosha shaqsiyadeed iyo munaasabadaha kale ee xuska ah laga soo bilaabo markii uu ilmo ahaa ilaa markii uu caan noqday.
Nolosha iyo kor u kaca Ferran Torres. Dhibcaha Sawirka: Instagram.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu yahay cunug cusub oo guriga kujira qadka dhexe oo balaaran oo caan ku ah heerka shaqadiisa iyo qalin jabinta saadaalintiisa, hal abuurka, iyo koontaroolka ugu dhow xawaaraha. Si kastaba ha noqotee, kaliya in yar oo ka mid ah kuwa jecel kubada cagta ayaa tixgeliyay akhrinta Ferran Torres 'Biography oo aan soo diyaarinay oo aad u xiiso badan.
Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan kuu soo bandhigno annaga Table of Content ka hor sheekadiisa Carruurnimada cajiibka ah iyo Taariikh nololeedka
Sheekada Carruurnimada Ferran Torres:
Mid ka mid ah sawir caruurnimadi hore ee caan ah ee Ferran Torres. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Si loo bilaabo, Ferran Torres García wuxuu ku dhashay maalinta 29th ee Febraayo 2000 degmada Fois ee Spain. Xiddiga garabka ka ciyaara ee Isbaanishka ayaa ah curadka koowaad iyo labaad ee seddex carruur ah oo u dhashay hooyadiis iyo aabihiis.
Sida halyeeyadiisa waddaniga ah Andreas Iniesta, Xavi iyo Sergio Ramos, Ferran waa dhalasho Isbaanish ah. Xaqiiqdii, wuxuu ku koray meeshii uu ku dhashay ee Fois oo ay weheliyaan walaashiis ka weyn iyo saaxiibka ugu wanaagsan ee carruurnimada "Arantxa" iyo walaalkiis yar oo caan ah.
Sawirka Carruurnimada ee Ferran Torres oo ay weheliso walaashiis ka weyn Arantxa. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Markii uu ku soo barbaaray Fois, Ferran wuxuu ahaa nin xiiseeya kubada cagta oo heysta wax uu ku daawado kubbadda cagta TV wuxuuna isku dayay inuu ku daydo xirfadda uu arkay ciyaartoy xiddig soo bandhigaya. Mararka qaar wuu saxay, wakhtiyo kale wuu khaldamay.
Waaliddiinta Ferran Torres ayaa garab istaagayay markii uu si qaldan u toogtay kubbada cagta. Marar badan waxay ku dhacaan jahwareerka sanqarta warshadaha dilaaga ah, quraarado iyo timo-jeexan. Si kastaba ha noqotee, qofna waxba uma qabanin inuu ka celiyo jacaylka uu u qabo kubada cagta iyo jacaylka uu u qabo midda uu jecel yahay iyo naadiga uu jecel yahay - Valencia CF.
Wuxuu ku soo koray sidii xamaasad kubada cagta ah. Ma qiyaasi kartaa waxa calanka kooxda uu saaran yahay? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Aasaaska Qoyska Ferran Torres:
Markii uu ahaa cunug yar, waalidiinta Ferran Torres waxay kicinayeen jaceylka uu u qabo kubada cagta iyagoo u kaxaystay garoonkooda Valencia CF Mestalla halkaas oo uu ku soo arkay ciyaaro badan intii uu yaraa oo uu ka marag kacaya, kacsiyada iyo guulaha naadiga Isbaanishka.
Runtu waxay tahay, aabihiis iyo hooyadiis labadaba waxay ahaayeen dad dhagaysta dabaqado dhexe ah oo awoodi kara inay iska bixiyaan tikidhada ciyaarta naftooda iyo caruurta. Markii uu ahaa cunug, Ferran wuxuu ahaa mid ku dhow dhow waalidkiis - gaar ahaan aabihiis saaxiibtinimo wanaagsan.
La kulan mid ka mid ah waalidiinta 'Ferran Torres' - aabihiis aadka u fiican (inta lagu guda jiro caruurnimadiisii ​​caruurnimada) - Buundada: Instagram.
Qaabkaas ciyaareed, dhallinyar Ferran wuxuu ku soo barbaaray taageere Valencia wuxuuna ku riyooday inuu u ciyaaro Los Ches iyo sidoo kale inuu qabsado xirfad u qaadan doonta meel ka durugsan xeebaha Spain.
Sheekada Carruurnimada Ferran Torres- Daryeel Buildup:
Ferran Torres waalidkiis, markii uu ahaa 6 sano si farxad leh ayuu u arkay inuu iska diiwaangeliyay nidaamka dhalinyarada ee Valencia halkaas oo uu ka bilaabay shaqo adag oo ku saabsan kubbadda cagta.
Intii uu Ferran joogay, wuxuu bilaabay inuu qaabeeyo ciyaartiisa ka dib markii dhowr ciyaartoy oo maxalliga ah iyo kuwa qaran oo uu ku jiro halyeeyga David Villa kaasoo xiddig u ahaa Valencia waqtigaas.
Muuqaal dhif ah oo ku saabsan kubbada cagta markaas ayaa ku soo kortay akadeemiga kooxda Valencia. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sheekada Carruurnimada Ferran Torres- Sannadihii Hore ee Kubadda Cagta:
Sidii laga filaayey cunugga oo leh hammi, Ferran wax dhib ah kuma uusan qabin kor u qaadida nidaamka dhalinyarada ee Valencia madaama uu ahaa nin rajo fiican leh oo ka mid ah astaamaha qeexaya carruurta-yaabka leh.
Sidaas oo kale, Ferran wuxuu helay fursaddii dhif ahayd ee kulankiisii ​​ugu horreeyay ee keydka Valencia markii uu keliya ahaa 16 sano + maalmo yar oo Oktoobar 2016 ah, oo ah muuqaal u gogol xaaraya inuu noqdo mid isha ku haya mustaqbalka fog.
Fiiri yaa ahaa 16-sano jir markii uu bilaabay inuu u ciyaaro keydka Valencia. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sheekada Taariikh nololeedka Ferran Torres - Wadada loo maro Magaca:
Qaab dhismeedka wanaagsan ee Ferran iyo joogteyntiisa ayaa ugu dambeyntii arkay inuu horumar ka sameynayo kooxda B-ka Valencia ka hor ololaha 2017-18, horumarkaas oo u horseeday hamigiisii ​​ugu horreeyay ee kooxdiisu inay u soo dhowaato fulinta.
Valencia ayaa garatay rabitaanka Ferran isla markaana waqti u dhumin inay heshiis la gasho wiilka yar bishii Oktoobar 2017 ka hor inta uusan ugu dhaqaaqin kooxda koowaad ee kooxda 1da Janaayo 2018.
Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa helay qandaraas qandaraas kordhin ah ka hor inta uusan albaabka u imaanin talaabooyinkiisa bilooyin ka dib. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sheekada Taariikh nololeedka Ferran Torres - Ubax Kaga Baro:
Markii uu xaqiijistay u soo gudbinta kooxdiisii ​​hore ee Valencia, Ferran wuxuu ku fiicnaa inuu cadeeyo qiimahiisa isagoo kasbaday bilowga Copa del Ray, La Liga iyo kulamada Champions League. Waxay ahayd muuqaalo muhiim ah oo hore oo caan ah oo caan ku ahaa albaabkiisa.
Bilowga, garabka ayaa noqday xiddigii ugu horreeyay ee ku dhashay 2000-kii kooxihii Isbaanishka ka dhaliya goolal Horyaal ah markii ay Valencia 4-1 kaga adkaatay Lille bishii Nofembar 2019. Sawirkan ayaa sidoo kale u arkay inuu noqday gooldhaliyaha ugu da'da yar ee taariikhda Valencia taariikhda.
Marka ugu horeysa: Eeg xuska Ferran ee goolkiisii ​​ugu horreeyay ee horyaalka. Astaanta Sawirka: Marca.
Nolosha Jacaylka Ferran Torres- Kali Ma Yaqaan, Gabar Ama Xaas?
Garab kasta oo dheere ah oo qurxoon sida Ferran wuxuu kuxiran karaa xaaskiisa ama wuu ka xun yahay, la'aanteed gabar la'aan. Waxaa la yaab leh, Ferran waa kaligiis waqtiga qorista, wiilal iyo gabdhona ma uusan guursan.
Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa fahamsan inuusan u baahneyn caawinta gabar saaxiibtinimo ah (ugu yaraan weli) si uu uheliyo muhiimadiisa mudnaanta gaar ahaan madaama uu qarka u saaran yahay inuu qabto fursado badan oo ka ciyaara kubbadda cagta.
Wali gabar gabar ah weli muu muuqdo isagoo cidla ah sawirkan qurxoon. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Nolosha Qoyska ee Ferran Torres:
Arinta ka dambaysa muuqaalka Ferran ee koritaanka cajiibka ah iyo xirfadiisa kubbadda ayaa ah qoys taageero leh. Waxaan kuu soo qaadaneynaa xaqiiqooyin ku saabsan xubnaha qoyska Ferran Torres oo ka bilaabaya waalidkiis.
Ku saabsan Aabaha iyo Hooyada Ferran Torres:
Ferran hooyadiis iyo aabihiis waxay si xamaasad leh u jeclaayeen taageerayaasha Valencia ka hor intaanu garabka ka ciyaarin. Waxay ku fiicnaayeen inay u kaxeeyaan Mastella oo ay kujirto xusuustii finalka Copa del Ray ee 2008 taasoo ay ku guuleysatay Valencia. Labada waalidba waxay u gutaan waajib inay ka soo qeybgalaan ciyaaraha Ferran oo ay si joogto ah u siiyaan casharo ku saabsan baahida loo qabo is-hoosaysiinta iyo edebtiisa.
Hoos u dhig sawirka Ferran Torres dushiisa xayawaankiisa iyo hooyadiis. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Ku saabsan walaalaha Ferran Torres:
Ferran wuxuu leeyahay labo walaalo ah oo ay ku jiraan walaashiisa ka weyn Arantxa iyo walaal yar oo aad looga yaqaan. Arantxa waa qof sifiican ugu dhaw qalbiga Ferran iyo ilaaliyaha sheekadiisa carruurnimada. Way ogtahay wax kasta oo ku saabsan bro yar-yar oo ay labadooduba wadaagaan tattoo suugaanta cagtooda. Tattoo wuxuu xusuusinayaa labada duco inaysan u oggolaan inay wax uun culeeyaan.
Ferran Torres oo ay weheliso walaashiis ka weyneyd Arantxa. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Ku saabsan ehellada Ferran Torres:
Ka fog Ferran Torres noloshiisa qoys ee degdegga ah, wax badan lagama garanayo xididdada qoyskiisa ee la xiriirta awooweyaashiisa iyo awoowayaasha. Ma jiraan wax diiwaan ah oo ku saabsan adeeradii Ferran iyo adeerkiis halka adeerkiis iyo walaalihiis aan wali la ogeyn waqtiga la qorayo taariikh nololeedkan.
Xaqiiqda Nolosha Qofka:
Tani waxay umuuqataa hab caqli badan oo dabaasha. Miyaanay Ferran ahayn aqoonyahan? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Ma ogeyd in Ferran Torres uu leeyahay dabeecad la mid ah oo ka turjumeysa astaamaha shakhsiyaadka ay calaamaddooda zodiac go'antahay? Waa nin is-hoosaysiin, shucuur ahaan caqli badan, dadaal badan oo jecel.
Intaa waxaa sii dheer, Ferran wax dhib ah kuma qabin muujinta xaqiiqooyinka ku saabsan noloshiisa gaarka ah iyo tan shaqsiyadeed. Marka garabka uusan ku jirin garoonka ciyaarta waxaa laga heli karaa isagoo qabanaya howlo dhowr ah oo lagu yaqaanay inuu xiiseynayo iyo hiwaayadiisa. Waxaa ka mid ah safarka, dabaasha iyo waqti fiican la qaadashada qoyskiisa iyo asxaabtiisa.
Doomaha dheereeya ee raaxada ayaa loogu tala galay in ay ku safraan maal-galiyeyaasha waaweyn ee fasaxa. Garabka ayaa ah mid lacag badan bixiya. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Marka la eego sida uu Ferran Torres lacagtiisa u kharash gareeyo, qiimehiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasay 1.5 milyan Euros marka la qorayo taariikh nololeedkan. Ku-biirinta durdurrada kubbadda cagta garabka ayaa waxaa ka mid ah mushaharka iyo mushaharka uu helo marka uu ciyaarayo koox heerka koowaad ah. Intaas waxaa sii dheer taageerooyinka ay ka helaan shirkado ay ka mid yihiin Adidas wax badan ayey u kordhineysaa qiimeyntiisa saafiga ah.
Sidaas darteed, Ferran ma ahan shisheeyaha raaxada nolosha oo ay kujirto wadooyinka Spain ee gawaarida qalaad iyo ku noolaashada guryaha qaaliga ah. Maxaa intaa ka badan? Ferran wuxuu ku bixiyaa fasax weyn xafladaha iyo xafladaha si adag.
Xaqiiqooyinka Ferran Torres:
Taageerayaasha kubada cagta ayay u badan tahay inay iloobaan Xaqiiqada, laakiin waxay si fiican u xasuustaan ​​sheekooyinka carruurnimada. Tani waa sababta qaybtaan ugu dambeysa ee Ferran Torres Biography, waxaan ku siineynaa xaqiiqooyin yar oo la yaqaan ama aan laga warqabin oo ku saabsan garabka.
Xaqiiqada # 1: Waxaan soo gaabinay Mushaharkiisa:
Qandaraaska xiddiga garabka ka ciyaara ee Valencia CF wuxuu u arkaa inuu dhaliyo mushahar dhan 40,000 kun ginni usbuuciiba. Mushaharka Ferran Torres wuxuu u dhigay tiro yar, waxaan haynaa waxyaabaha soo socda.
BADBAADADA / DHAQANKA
Daqlihiisa Euros (€)
Daqligiisa Doollar ($)
Waxa Uu Helaa Sanadkii € 2,368,377.2 £ 2,085,600 $ 2,559,031
Waxa Uu Shaqeysto Bishiiba € 197,364.8 £ 173,800 $ 213,253
Waxa Uu Helaa Isbuucii € 45,898.8 £ 40,418 $ 49,593.6
Waxa Uu Helo Maalintii € 6,556.9 £ 5,774 $ 7,084.8
Waxa Uu Helaa Saacad Kasta € 273.2 £ 240.6 $ 295.2
Waxa Uu Helaa Daqiiqad Kasta € 4.6 £ 4.0 $ 4.9
Waxa Uu Ku Helo Labaad Oo Kasta € 0.08 £ 0.07 $ 0.08
Tani waa waxa FARSAMADA FERRAN kasbaday tan iyo markii aad bilowday daawashada Boggan.
Ma ogeyd?… Celcelis ahaan ninka jooga dalka Spain ee dakhliga ku soo gala € 1.889 bil waxay u baahan tahay inay shaqeyso ugu yaraan 2 sano iyo 1 bilood si loo kasbado € 45,898.8 taas oo ah lacagta uu qaato Ferran Torres bil gudaheed (waqtiga qoraalka).
Xaqiiqada # 2Muxuu yahay Diinta Ferran Torres:
Qoyska Ferran Torres waa Catholics iyo mid ku tababaranaya intaas. Xaqiiqdii, wuxuu si qaddarin leh u qaatay Maryantii bikradda ahayd oo dhab ah oo aan weligii ku boorin inuu sameeyo calaamadda iskutallaab mar alla markii uu galo garoonka cayaaraha tartanku.
Waxaa lagu arki karaa halkan isagoo ubax dhigaaya meel u dhow taallada gabadha Maryan. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Xaqiiqada # 3Xaqiiqda Tattoo Torres:
Sida aan horeyba u sameynay dowladdii hore, Ferran wuxuu leeyahay sawirada sawirada xirmooyinka barafka leh walaashiis ka weyn. Farshaxanku wuxuu u adeegaa inuu xasuusiyo inaysan qol u siin wax kasta oo culeyskooda hoos u dhigaya. Intaa waxaa sii dheer, Ferran wuxuu gacanta ku haysta sawir yar oo iskutallaab ah.
Xaqiiqada # 4Xaqiiqda FIFA: Ferran Torres 'Xaqiiqda FIFA:
Ma ogeyd in Ferran Torres uu leeyahay qiimeyn guud oo FIFA ah oo ah 78 waqtiga qoraalka. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa wax uun waqti ka hor inta uusan garabka gaarin inuu gaaro awooddiisa buuxda oo ah 86 iyadoo la tixgelinayo tamarta uu geliyo ciyaarta.
Xaqiiqada # 5: Ku saabsan dhalashadiisa iyo Taariikhda - 29-Febraayo:
Torres wuxuu ku dhashay maalinta 29th ee Febraayo. Sidaas oo kale ayuu u dabaaldegaa dhalashadiisa hal jeer weligiis 4 sano.
Nasiib wanaag, wuxuu u dabaaldegay Febraayo 2020. Intaas waxaa sii dheer, sannadkiisii ​​uu dhashay 2000 wuxuu ahaa sanadka Ridley Scott 'Gladiator”Shineemo. Ma ogtahay inay sidoo kale ahayd sanadkii ay daabacday majaladda caanka ah ee Oprah Winfrey? Hadda waad ogtahay!
Qaar ka mid ah sii-deynno muhiim ah oo sameeyay 2000 sanadkii in la xusuusto. Dhibcaha Sawirka: Imdb iyo Oprah.
Xogta Taariikh nololeedka.
Magaca buuxa: Ferran Torres García.
Ku dhashay: 29 Febraayo 2000 (da'da 20 sida Abril 2020).
Meesha dhalashada: Foios, Spain.
Waaliddiinta: Mr iyo Mrs García.
Walaalo: Arantxa (walaasha ka weyn) iyo walaal aad u yar oo yaqaan.
Diinta: Masiixiyada (Katooliga).
Dhererka: 1.84 m (6 ft 0 in).
Miisaanka: 77 kg.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhrinta sheekada Carruurnimada Ferran Torres iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Xusuus-qorka Kubadda Cagta ee Valencia